नजिकैको जग्गा प्लटिङले कृषकको अर्गानिक खेति चौपट | Suvadin !
नजिकैको जग्गा प्लटिङले कृषकको अर्गानिक खेति चौपट
Apr 09, 2019 15:47
काठमाडौं,चैत्र २६ - काठमाडौं तारकेश्वरका कृषक स्वयंवर खड्काले भईरहेको जग्गा प्लटिङले आफ्नो अर्गानिक खेती विनाश भएको दुखेको पोखेका छन् । नजिकै भईरहेको जग्गा प्लटिङले अर्गानिक खेतिमा अनावश्यक माटो थुप्रिदा आफुले ठुलो घाटा व्यहोर्नु परेको बताए । हाल उनको अर्गानिक खेतिमा क्षति पुग्नेगरि जग्गा प्लटिङ भईरहेको छ ।
जग्गा प्लटिङ गर्ने धनीहरुले आफ्नो मात्रै काममा ध्यान दिदा त्यसको असर आफ्नो कृषि व्यवसायमा पर्न गएको उनको भनाई छ । खड्काले विगत ४ बर्षदेखि ४ रोपनी जग्गामा अर्गानिक खेति गर्दै आएका हुन् । प्लटिङका क्रममा अर्गानिक खेतिमा अनाश्यक माटो थोपरिएको र पानीले समेत उर्बर माटो बगाएको उनको गुनासो छ ।
प्लटिङका क्रममा आँखै अगाडिको आफ्नो खेती विनाश भएकोतर्फ रत्ति ध्यान नदिएको उनले बताए । आफुले कैँयौँ घाटा व्यवहोर्नु परेको बताउँदै यसबारे स्थानीय निकायलाई समेत गुहारेको उनले बताए । स्थानीय निकायले समेत आफ्नो समस्यातर्फ ध्यानै नदिएको बताए । आफुले कहाँ न्याय पाउने उनको प्रश्न थियो ?
क्षतिपुर्ति कँहि कतैबाट पाउने आशा नदेखेको भन्दै आफ्नो घर बनाउने क्रममा अरुको घर भत्केको छ कि छैन भन्ने ख्याल गर्नु पर्छ कि पर्दैन ? भनि प्रश्न गरे । उनको अर्गानिक खेति नजिकै हालपनि जग्गा प्लटिङ जारी छ ।
यसतर्फ तारकेश्वरस्थित कृषि नगर शाखालाई अवगत गराएको र नगरशाखाले आफ्नो फाईल अघि नबढाएको खड्काले गुनासोसमेत गरे । खड्काले फस्टाउँदो रुपमा अर्गानिक खेति गर्दै आएका छन् । उनले उत्पादन गरेको तरकारीले निकै राम्रो बजार लिदै आएको स्थानीय बताउँछन् ।